News - News Company - NCG vsThe Exchange vs Shengda ajandaha dood cilmiyeedka
Markay tahay 16:00, 20/11/2020, Wu Quandong, Madaxweynaha Nongchuanggang Cross Border E-Commerce (Weifang) Co. Ltd, VP Ma Yuyou, ayaa hogaaminaya kooxda si ay u soo booqdaan ugana soo qayb galaan dood cilmiyeed iskaashi ee Bariga Aasiya Xoolaha Isweydaarsiga Nuxurka ugu weyn ee kulankaan ayaa ah in lagu falanqeeyo ka doodida Shiinaha Nongchuanggang xudduudda iskudhafka e-ganacsiga ee warshadaha (hadda kadib loogu yeero NCG), Anqiu Shengda Beeraha Alaabta Ganacsiga Ltd (hadda kadib loogu yeero Shengda) iyo Isweydaarsiga Xoolaha ee Bariga Aasiya. ilaa isweydaarsiga). Ka wada hadalka ka faa'iideysiga shaqsiyaadka kala duwan, raadinta iskaashiga, isdhexgalka ka faa'iideysiga kheyraadka, dhiirrigelinta dhoofinta beeraha Anqiu iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed, dhisida heerarka kobaca beeraha cusub ee Anqiu.
Wu Quandong wuxuu tilmaamay in beerta warshadaha e-commerce e-commerce ay tahay inay si buuxda u taabato kheyraadka beeraha ee jira ee ku yaal Anqiu, oo ay la xiriiraan shirkadaha dhoofinta, ayna noqdaan barxad ganacsi oo xuduudaha isaga gudubta oo runtii ka tirsan shirkadaha adeegga, si tartiib tartiib ah loogu dhiso Anqiu galay heer dhul-beereed heer qaran ah. Barxadda baarkinka warshadaha ee 'E-commerce' waa inay sameysataa qaab hawlgal oo iskuxiraya qadka iyo khadka tooska ah, dhiirrigelinta macaamillada elektaroonigga ah ee ganacsiga caalamiga ah, isku dar B2B iyo B2C, kuna xirnaato macaamiisha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah leh kaydka bakhaarada dibadda. Qaado ganacsiga xuduudaha oo ah barta cusub ee laga soo galo isla markaana si buuxda ugu dheelo faa'iidooyinka Xinjiang. Sii wad inaad isku darto faa'iidooyinka is-dhaafsiga ah ee afarta qaybood ee sarrifka, kuwaas oo kala ah xulashada booska iyo liistada, dalabyada iyo iibinta, iibsashada iyo iibinta, maaliyadda silsiladda bixinta. Iyada oo ku saleysan barta, qabashada diiradda maaliyadeed ee internetka iyo silsiladda bixinta qad la'aanta.
Kaqeybgalayaashu waxay barteen qaybaha ganacsiga waaweyn iyo qaababka howlgalada ee isdhaafsiga iyadoo loo marayo bandhiga fiidiyowga kahor kulan cilmiyeedka. Kulankan, waxay si qoto dheer uga wada hadleen qaabka wada shaqeynta iyo rajooyinka balaaran ee NCG, Sarrifka iyo Shengda. Gao Fulong, Zhang Min iyo Liu Shili waxay falanqeeyeen oo ay ka wada hadleen baaxadda ganacsiga iyo faa'iidooyinka shirkadaha ay leeyihiin, waxayna gaareen ujeedo iskaashi oo hordhac ah: Isweydaarsigu wuxuu kordhin doonaa mashaariicda wax soo saarka beeraha iyo dhinacyada oo uu buuxin doonaa shuruudaha ganacsiga qadka. Royal waxay ku tiirsan tahay sarrifka inay sii waddo ballaadhinta cabirka, ku dhiirrigeliso wax soo saarka beeraha Anqiu khadka. Beerta warshadaha e-commerce ee warshadaha ayaa kaabaya Shengda Logistics, waxay kuxirantahay ganacsiyada khadka tooska ah iyo kuwa khadka tooska ah ee sarrifka, waxayna iskuxidhaa adeegyada maaliyadeed ee sahayda. Saddexda shirkadood waxay sameeyeen qaab iskaashi istiraatiiji ah qaabka wax soo saarka.